Hanana lavanty vaovao azo havaozina 3000 Megawatts | Fanavaozana maintso
Tomas Bigorda | | Herin'ny rivotra, Angovo Solar Photovoltaic, Angovo azo havaozina
Ny minisitry ny angovo, fizahan-tany ary fandaharana dizitaly, Álvaro Nadal, dia nanondro fa ny lavanty manaraka ny angovo azo havaozina ho an'ny "maitso" 3.000 megawatts (MW) hamela saika azo atao mahatratra ny tanjona kendrena 20% napetraky ny fifanarahana eropeana ho an'ny 2020.
Tamin'ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety taorian'ny filankevitry ny minisitra dia nanondro i Nadal fa miaraka amin'ny lavanty vaovao, izay nomen'ny governemanta alalana, miaraka amin'ny fankatoavan'ny didim-panjakana momba ny fivoriambeny, ary ny fepetra "fanampiny" noraisina, Espaina dia hahatratra 19,5% azo havaozina, manomboka amin'ny 17,3% ankehitriny, "Manakaiky ny fanakaikezana ny fanatrarana ny kendrena 2020."
Tamin'izany fomba izany no nandinihany ny toe-javatra misy an'i Espana amin'ity làlana ity mankany amin'ny tanjona azo havaozina amin'ny taona 2020 an'ny "làlana fanarahan-dalàna ahazoana aina", raha oharina amin'ireo firenena eropeana hafa izay tsy maintsy hatao "Ezaka lehibe" hanatanterahana azy ireo. Ho fanampin'izay, neken'ny fanjakana ny drafitra fanampiana 500 euro ho an'ny fividianana fiara misy angovo hafa.
Tamin'ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety taorian'ny filankevitra dia nanazava ny minisitry ny angovo, Álvaro Nadal, fa hitovy ny teo amin'ny mari-pankasitrahana tamin'ny voalohany, voalohany ny fihenam-bidy lehibe indrindra natolotra ary, raha misy fatorana, ny ora fiasa be indrindra, ny fepetra iray nekeny fa nahatonga ny fametrahana angovo angovo, izay miasa andro aman'alina, homena amin'ny vidiny mitovy amin'ny ankamaroan'ny megawatt izay natao lavanty, izay 3.000 koa.
Ity tsikera ity dia nahazo fanakianana avy amin'ny fikambanana photovoltaic referansa, UNEF ary Anpier, izay mahita amin'ny fampiharana azy io fitsaboana tsara ho an'ny herin'ny rivotra ary manasongadina ny fahafahan'ny masoandro mifaninana amin'ny teny mitovy.
Na izany aza, ny minisitry ny angovo dia nihevitra fa ny fotovoltaika dia hanana "fahafaha-miditra bebe kokoa", satria, na dia miharatsy aza ny fifaninanana amina ora maro, dia hanana famatsiana bebe kokoa izany, satria 99,3% tamin'ny totalin'ny varotra teo aloha dia nandeha tamin'ny herin'ny rivotra.
Naneho ny heviny ilay mpanao politika fa ny valin'ny lavanty natao teo aloha, natao tamin'ny Mey, dia "tsara be", miaraka amin'ny fangatahana 10.000 8.000 MW, izay saika XNUMX MW Izy ireo dia tamin'ny vidiny ambany indrindra.
Tamin'ity fomba ity, nanapa-kevitra ny governemanta fa hanao lavanty angovo vaovao "maitso", satria be ny fangatahana, hoy i Nadal. Raha ny filazan'ny minisitra "Ny fanavaozana dia amin'ny vanim-potoana ara-dalàna ary afaka mifaninana mifanatrika amin'ny ambiny angovo."
Mikasika an'io lafiny io, Nadal dia nihevitra fa misy ny famatsian-tsolika "tena lehibe" tamin'ny lavanty teo aloha, na ny rivotra na ny photovoltaic, izay hahafahan'ny "fitambaran'izy roa rehefa voavaha" ity loka vaovao ity.
1 Varotra lavanty teo aloha
2 Miandrasa an'i Garoña
Varotra lavanty teo aloha
Tamin'ny 17 Mey, ny Governemanta dia efa nanolotra 3.000 MW ny hery 'maintso', izay 2.979 MW, 99,3% amin'ny fitambarany dia lasa herin'ny rivotra, satria io no teknolojia angovo bebe kokoa novokarina isaky ny vondrona hery napetraka; 1 MW ka hatramin'ny photovoltaic, 0,03%; ary 20 MW ny teknolojia hafa, 0,66%.
Ny vondrona Forestalia (mpandresy lehibe), Gas Natural Fenosa, sampana 'fanavaozana' an'i Endesa (Enel Green Power), ary Gamesa no mpandresy lehibe amin'ny lavanty satria 2.600 MW mahery no nomena.
Nipaoka indray i Forestalia, tamin'ny fomba mitovy amin'ny lavanty tamin'ny taon-dasa, tamin'ny fandresena fonosana lehibe indrindra amin'ny lavanty, miaraka amin'ny 1.200 megawatt (MW), 40% amin'ny totaliny.
Ho an'ny ampahany, nomena Gas 667 MW ny Gas Natural Fenosa, ary nomena 540 MW ny Enel Green Power Spain Siemens Gamesa miaraka amin'ny 206 MW.
Vondrona kely kokoa, toy ny Norvento, izay nahazo 128 MW, ary ny vondrona Aragonese Brial, izay nahazo 237 MW, dia nahavita ny totalin'ny 3.000 azo havaozina MW natomboka.
Miandrasa an'i Garoña
Etsy ankilany, nanamafy izy fa mbola tsy nandray fanapahan-kevitra ny governemanta momba ny fanidiana na fanavaozana ny fahazoan-dàlana avy amin'ny toby famokarana nokleary Santa María de Garoña (Burgos) ary tsy hanatanteraka izany. mandra-pahalalako ny hevitra ary ny fiampangana ny "rehetra" liana amin'ity raharaha ity. Na dia izany aza, nanampy ny minisitra fa "mbola" mbola tsy nanomboka fivoriana ny Governemanta, mba hahafahan'ireo liana liana miady hevitra sy maneho ny heviny manoloana izany.
Nankatoavin'ny governemanta ihany koa ny didim-panjakana roa hafa, iray fanampiana ho an'ireo tanàna misy mponina latsaky ny 20.000 ho an'ny tetikasa an'i fahombiazan'ny angovo; ho fanampin'izany, ny Plana Movea ho fanampiana amin'ny fividianana fiara mandeha amin'ny alàlan'ny angovo hafa, nomena 336 tapitrisa euro sy 14,26 tapitrisa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Angovo azo havaozina » Hanana lavanty vaovao azo havaozina isika
Reraka amin'ny arintany izao tontolo izao